Iindaba-Imeko yangoku kunye nethemba lePTA yeNtloko kunye neMakethi
Imeko yangoku kunye nethemba lePinet Chain kunye neMakethi
I-PX yeyona nto ibalulekileyo ingasetyenziswayo kwimveliso yonke ye-polyester, Utshintsho lomzi mveliso wayo inegalelo elibalulekileyo kushishino oluthile. ukungena ngokusesikweni kuphuhliso lwe-China lokwaneliseka kolwendlela.
Okokuqala, jonga ukuhanjiswa kwePX yehlabathi kunye nemeko ebango. Kwilizwe jikelele iChina, South Korea, India, Japan kunye ne-United States zibekwe kwindawo ezintlanu eziphezulu. , Njengomvelisi omkhulu wehlabathi, iIndiya ikwangoyena mfuno mkhulu. Ngenxa yokukhutshwa kwemfuno yasekhaya yokukhutshelwa, phantse ama-60% emfuno yonyaka kufuneka axhomekeke Kukungenisa ngaphakathi kumazwe aselumelwaneni anje ngeSouth Korea neJapan. Ngo-2018, i-PX yase-China yayikhupha iitoni ezizizigidi ezili-10,31 kuphela, kwaye umthamo wayo wokungenisa wawuphakame nge-15,3 lezigidi zeetoni, ngamanye amagama, kufuneka ungenise ngaphezulu kweetoni ezisisigidi se-PX rhoqo ngenyanga.
Ngaphantsi kwesikhokelo somgaqo wentengiso kunye nomtsalane wenzala ukunika inkxaso yemigaqo-nkqubo ukwandiswa komgangatho wokuveliswa kwePara xylene eChina wangena kwixesha elitsha ngo-2005Umzekelo uHengli Petrochemical eDali, uShehonghong Petrochemical eLianyungang, Jiangsu ngonyaka ka-2019, amandla emveliso emitsha ye-PX eyi-4,5. Isigidi seetoni zeNkampani yeHengli Petrochemical Company, Hongrun Petrochemical Company, eyaqala ukusebenza ngo-Agasti, kunye ne-Hainan Refining kunye ne-Chemical Phase II, eyaqala ukusebenza ngo-Okthobha, bonke baqonda ukusebenza kwezorhwebo. Kwangelo xesha, kwikota yesine, kukho ukumiliselwa okufomathiweyo, kwaye kukho ithuba lokuqalisa. Kuqikelelwa ukuba umthamo omtsha wokuvelisa uza kufikelela kwizigidi ezili-10,3 zeetoni ngonyaka, ukunyuka nge-53% kwithuba elifanayo kunyaka ophelileyo. Ukusuka ngonyaka wama-2020 ukuya kowama-2022, zisekhona iitoni ezingama-25 ezigidi, kwaye amandla amatsha aya kufakwa kwimarike enye emva kwenye.
Ngokuchasene necala elingasemva loncedo lwasekhaya loncedo lwe-PX ye-China kunye nokufunwa kwembonakalo kuya kutshintsha kakhulu. Ngokukhula ngokukhawuleza komthamo wemveliso yePX yaseTshayina, ukuhanjiswa kwexa elizayo kunye nephethini yemfuno eNortheast Asia kuya kuthi ngokuthe ngcembe kuguqukele kwintsalela, kwaye kwimeko yexabiso elifanelekileyo lomgama kunye nengeniso, inokuthunyelwa nakumazwe ane-gap. Ubudlelwane borhwebo kunye nomzantsi mpuma Asia, Kukwakhona amathuba okuba kuthunyelwe kwelinye ilizwe ukuguqukela kwelinye ilizwe
Ukusuka kumbono wokunikezelwa kwehlabathi kunye nephethini yemfuno, iChina ngowona mthombo ubonakalayo kwihlabathi, kodwa ikwangoyena mthengi omkhulu. Umthamo wemveliso yonyaka wase China yaba zizigidi ezingama-52.29 zeetoni, zibalwa ngaphezulu kwesiqingatha sehlabathi liphela. Ukusuka kwimbonakalo yokuhambahamba kurhwebo lwehlabathi, isixa seTshayina sokungenisa elizweni singama-760 amawaka eetoni, ikakhulu ivela eThailand, eTaiwan naseMzantsi Korea.
Ukusuka kwimeko yonikezo lwasekhaya, imeko yenzuzo sisalathiso esiphambili soncedo lwasekhaya lwe-PT. Ngo-2011, i-PHP yangena kulwandiso lomthamo, okukhokelela ekuqubekeni ngamandla komgangatho wemveliso, okukhokelele ekubuyiselweni okukhulu kwenqanaba lenzala le-PDA. Ngaphantsi kwemeko yokhuphiswano, indlela yenzuzo yexesha elide idla ngokudodobala, ezinye iindlela zokubuyisela umva zisusiwe, kwaye ukubonelela kunye nokufuna kuthandeke.ukuvula ngo-2017, i-PK ingene kwinqanaba lokuphucula ixabiso lokuchuma. Ngo-2019, inqanaba lenzala le-PTA kanye lakhuphuka laya kwi-1700 yuan ngetoni nganye.PK ifakwe kumaza amatsha emveliso ephezulu.
Ukuchaphazeleka kokuphuculwa kwendalo esingqongileyo, ukukhawulezisa i-polyester, ukwandiswa kwamandla Ukuphuculwa kwemveliso ye-polyester kuphuculwe kakhulu, okuyeyona nto iphambili kushishino lwe-polyester kwiminyaka emibini edlulileyo. Ukuhamba kunye nokwanda, ukwanda kwe-polyester, ukhuphiswano luye lwanda, ukuze inqanaba lenzuzo lehle kakhulu, amandla emveliso ye-polyester yexesha elizayo ayathandeka.
Njengoko ulwandiso lwendibaniselwano yemizi-mveliso aludityaniswa, inqanaba lezinto ezinamandla ezivelisiweyo linyanzelise inqanaba lenzuzo yesityalo se-polyester, into yokulahleka kwesityalo kwiphondo. Ukusuka kwimbonakalo yexesha elizayo, ukukhula kwenkqubo yokubonelela nge-polyester kuyehla, kunye nokunqongophala kwenkqubo kunye neendleko ezisezantsi zemveliso zilungele ukwanda kweenzuzo ze-polyester. Nangona kunjalo, iingxinano zorhwebo zase-Sino-US ziya kuchaphazela imakethi ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile. Amaxabiso e-China alungisa ukurhweba ngendwangu aya kuchaphazela ngqo ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kwengubo yase China e-United States, nangona zikhona iimpawu zokuphuculwa kothethathethwano lwentengiso yase-Sino yase-US. Ubudlelwane be-Sino-US ukumiselwa kwexabiso le-China kwelenziwe kunefuthe ngqo kwimpahla ethunyelwa ngaphandle e-China e-United States. Nangona kukho imiqondiso esebenzayo kuthethwano lwentengiselwano yase-Sino-US yakutshanje, amalaphu e-EU kunye nezithintelo ezithile zorhwebo nxamnye ne China ziye zanda ngokuthe chu kule minyaka idlulileyo, kwaye imeko icacile. Oku kuya kuchaphazela ngqo ukuthunyelwa kwelinye ilizwe lase China.